Madaxweynaha Soomaaliya oo shaaca ka qaaday Wakhtiga uu kulmayo Baarlamaanka | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya oo shaaca ka qaaday Wakhtiga uu kulmayo Baarlamaanka
MUQDISHO – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa shir jar’aaid uu ku qabtay Madaxtooyada uga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in fadhiga ugu horreeya ee Xildhibaanada cusub uu dhici doono 15-ka bishan ,wuxuuna ku baaqay iney si degdeg ah loo soo dhameystiro diiwaangelinta xildhibaanada cusub.
Xoghayaha Baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa sheegay in ay bilaabeen diiwaangelinta Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee la doortay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay iney guul u tahay in doorashooyinkii Soomaaliya ka dhaceen si wanaagsan iyada oo aan la isku dilin sida markii hore ay dad badan ka cabsi-qabeen.
Wax war ah weli kama aysan soo bixin guddiga doorashada iyo kan xalinta khilaafaadka iyadoo ay jiraan kuraas ka badan 10 oo muran xooggan ka taagan yahay halka qaarkood ay honey u sheegeen in doorashadaas ay tahay ku noqod.
Maamulka Galmudug ayaa isaguna sheegay in Xildhibaanada lagu doortay Cadaado sideeda loo qaato iyadoo ay jiraan beelo horey u lahaa kuraas kuwa kale la siiyey,kuraas qoondada haweenka kamid ahaydna ay rag u tartameen.
Xildhibaanada Aqalka sare ee gobolada Waqooyi iyo qaar kamid ah xildhibaanada beelaha dirta waqooyi ayaa weli dhiman walow lasoo doortay dhammaan musharaxiinta labada aqal badankooda.